Ebola kuputika muCongo kuchikonzera hutano hwepasirese hutano
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Ebola kuputika muCongo kuchikonzera hutano hwepasirese hutano
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • DR Congo Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ipo World Health Organisation (WHO) yakamira kutaura kuti miganhu inofanira kuvharwa, ichiti njodzi yekupararira kweEbola kunze kwenharaunda haina kukura, sangano rakazivisa dambudziko rechirwere muDemocratic Republic of Congo sePublic Health Emergency of International Concern. (FUNGWA).
Mukuru weWHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akati hapafanire kurambidzwa kufamba kana kutengeserana, uye hapana kuongororwa kwevanopinda mumachiteshi kana nhandare kunze kwenzvimbo iripedyo. Sangano rakataura, zvisinei, kuti njodzi kunyika dzakavakidzana "dzakanyanya kwazvo." Vanhu vaviri vakafa muUganda kubva kuEbola - mukomana ane makore mashanu ekuberekwa pamwe nambuya vake vane makore makumi mashanu, uye kuGoma, mupristi akafa nehutachiona. Goma inomiririra mamiriro anoshungurudza nevanhu vanopfuura miriyoni vanogara ipapo uye guta riri nzvimbo huru yekufambisa pamuganhu weDR Congo neRwanda.
PHEIC ndiyo aramu yepamusoro inoshandiswa neWHO uye yakangopihwa ka4 zvisati zvaitika, kusanganisira denda reEbola iro rakauraya vanopfuura zviuru gumi nezviviri kuWest Africa kubva muna11,000 kusvika 2014. Hutachiona hweEbola hunokonzera kupisa muviri nekukasira, kushaya simba kwakanyanya, kurwadziwa kwemhasuru uye chironda huro iyo inozoenderera mberi kusvika pakurutsa, manyoka, uye kubuda mukati nekunze kubuda ropa, uye avo vanofa vanokundwa nemvura uye kuwanda kwemitezo. Utachiona hunopararira kuburikidza nekubata kwakanangana nemvura yemumuviri, ropa, tsvina, kana kurutsa kubva kune mumwe munhu akatapukirwa kuburikidza neganda rakatyoka, muromo, uye mhino.
Kuputika kwakatanga muna Nyamavhuvhu 2018 uye kuri kukanganisa matunhu maviri muDR Congo - North Kivu neIturi. Pavanhu vanopfuura zviuru zviviri nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvavo vakafa. Mumazuva makumi maviri nemaviri, nhamba yemakesi yakasvika chiuru, uye mumazuva makumi manomwe chete zvichitevera izvozvo, huwandu hwakawedzera kusvika pa2. Anenge gumi nemaviri makesi matsva anotaurwa zuva rega rega.
Mushonga wakagadzirwa panguva yekupararira kweWest Africa uye unoshanda 99 muzana asi uri kungoshandiswa neavo vanosangana zvakananga nevarwere veEbola. Parizvino, vanhu zviuru gumi nezvitanhatu vakabaiwa jekiseni. Pakati pevashandi vehutano vanoshandira varwere veEbola, 161,000 vakabata chirwere ichi kubva kutanga kwegore rino avo vanomwe vavo vakafa.
Huwandu hukuru hwenyaya dziri kuuya sekushamisika sezvazvinoratidzika mune izvo zviitiko, vanhu havana kusangana nemumwe munhu aive neEbola. Pamusoro pezvo, kutevera kupararira kwehutachiona kwave kwakaoma nekuda kwekusavimba kwevashandi vezvehutano zvichikonzera kuti chikamu chimwe muzvitatu cheavo vane hutachiona vasatsvage rubatsiro rwekurapwa nekufa mukati menzvimbo dzavanogara. Mhedzisiro iyi hutachiona huri kupararira zviri nyore kuhama nevavakidzani.
WHO yakaburitsa pachena kuti havana mari inokwana kurwisa kuputika uku. Mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi masere nemasere emadhora inongodiwa kungopedza kupararira kwechirwere ichi kubva muna Kukadzi kusvika Chikunguru. Iko kushomeka kwaive kunoshamisa $ 98 miriyoni.